“ထိုင်းမှာအနိုင်ကျင့် ဖမ်းစားခံနေရတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် စကားတစ်ခွန်း ပြောပေးပါ” | Saffron People's Movement
“ထိုင်းမှာအနိုင်ကျင့် ဖမ်းစားခံနေရတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် စကားတစ်ခွန်း ပြောပေးပါ”
November 22, 2010 in အလုပ်သမားရေးရာ	ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ နေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြသူတွေ အားလုံး ယာယီပတ်စပို့ မလုပ်မနေရ လုပ်နေရပြီ ဖြစ်တယ်။ ထိုင်းနဲ့မြန်မာအစိုးရက သတ်မှတ်သလို မလုပ်ရင်နေလို့မရအောင် ထိုင်းရဲတွေက ဖမ်းဆီးတယ်။ တပြိုင်တည်းမှာပဲ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေ ကလည်း ယာယီပတ်စပို့ မရှိရင် အလုပ်သမား မငှားရမ်းဘူး။ ဟိုဟိုဒီဒီလည်း သွားလို့မရဘူး။ ထိုင်းကုမ္ပဏီမှာလုပ်ကိုင်ကြတဲ့ ထိုင်းစကားတတ်တဲ့ မြန်မာ ဘော်လံတီယာ တွေရဲ့ မြှောက်ချီတစ်ခါ၊ ခြောက်ချီ တလှည့်တွေကြောင့်ပါ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ မလုပ်မနေရ လုပ်ကို လုပ်ကြရမယ့် အနေအထားကို ရောက်လာပါတယ်။ လုပ်လည်းလုပ်လာကြပါတယ်။
ဒီယာယီပတ်စပို့ ဆိုတဲ့ စီမံကိန်းကြီးကို ထိုင်းနဲ့ မြန်မာနှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့ ၂၀၀၆လောက်ကတည်းက စတင် အကောင်အထည်ဖေါ် လာခဲ့ပေမယ့် ၂၀၀၉နဲ့ ၂၀၁၀မှာမှ မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ခပ်စိပ်စိပ် လုပ်ကိုင် လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။
အစတုန်းက ကော့သောင်း/ရနောင်း၊ မြ၀တီ/မဲဆောက်နဲ့ မယ်ဆိုင်နဲ့တာချီလိတ် ဆိုတဲ့ နယ်စပ်စခန်း ၃နေ ရာတို့မှာ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မြ၀တီ/မဲဆောက် နယ်စပ်စခန်းကိုတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၅လလောက် ကတည်းက မြန်မာအစိုးရဘက်က ပိတ်ပစ်ခဲ့တာကြောင့် ယာယီပတ်စပို့ လုပ်တဲ့နေရာ ၂ခုပဲကျန်ပါတော့တယ်။
တကယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကို နှစ်နိုင်ငံအစိုးရတို့ သတင်းအချက်အလက် အပြည့်အစုံမရတာလား၊ ဒါမှမဟုတ် မသိချင်ယောင် ဆောင်တာလားဆိုတာတော့ သူတို့သာ သိပါလိမ့်မယ်။ သေချာတာ တစ်ခုကတော့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ လူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေ အားကောင်းမောင်းသန် လည်ပတ်နေတဲ့ ထိုင်းလိုနိုင်ငံမှာ အစိုးရက မျက်စိမှိတ်ထားတာသာ ဖြစ်ပါမယ်။ မသိတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
မြန်မာအစိုးရကတော့ တကယ့်အဖြစ်မှန်ကို မသိလို့ ထင်ပါတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံက အလုပ်သမားတွေ(၀ါ) မြန်မာကျွန်တွေ ကို ထိုင်းအစိုးရက လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတာ၊ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင် တွေက ချယ်လှယ်ချင်တိုင်း ချယ်လှယ်နေတာ၊ ခေါင်းပုံဖြတ် အမြတ်ကြီးစားနေတဲ့ ထိုင်းပွဲစားကုမ္ပဏီတွေ ဂုတ်သွေးစုတ် နေတာတွေကို အနည်းနဲ့အများတော့ သိမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးကို ရေးရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ ဖြစ်ရပ်မှန်တွေကို သိရှိသွားပြီးတော့၊ “ထိုင်းမှာ အနိုင်ကျင့် ဖမ်းစားခံနေရတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားများအတွက် စကားတစ်ခွန်းပြောပေးပါ” ဆိုပြီး ထိုင်းနိုင်ငံရောက် ရွေ့ပြောင်းမြန်မာ အလုပ်သမားများ ကိုယ်စား ဒီစာကို ရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကုန်ခဲ့တဲ့နှစ် ၂၀၀၈ အကုန် ၂၀၀၉ အကူးမှာထိုင်းအစိုးရက ယခင်အလုပ်သမားတွေကို ထုတ်ပေးထားတဲ့ (ဘတ်)ကို အပူတပြင်း လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ယခင်နှစ်တွေတုန်းက ၁၂လ ကာလ( ၁နှစ်)အတွက်မှ တရားဝင် ဘတ်ငွေ ၃၈၀၀ ကုန်ကျပါတယ်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာ ရှစ်လတာ နေထိုင်ခွင့်အတွက် တစ်နှစ်စာ ယူလိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ အလုပ်သမား၃သိန်းမှာ ၁သိန်းဖိုးကို ထိုင်းအစိုးရက မတရား ဖြတ်ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေထိုင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်(ဘတ်)လုပ်ပြီးတာနဲ့ တပြိုင်တည်း ၂၀၀၉ ခုစက်တင်ဘာလမှာ ယာယီပတ်စပို့ 
မလုပ်မနေရတဲ့ အနေအထားအထိ ထိုင်းအစိုးရ၊ ထိုင်းရဲ၊ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေက ကြပ်လာတာကြောင့် ယာယီ ပတ်စပို့လုပ်ဖို့ အလုပ်သမားတွေ လျှောက်ထားကြရပါတယ်။ တဆက်တည်း လုပ်ရသလို ဖြစ်သွား တာကြောင့် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ နေရပ်ရင်းကို ငွေမပို့ နိုင်အောင် အကြွေးတွေ တင်သွားခဲ့ကြရပါတယ်။
ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း မြန်မာအစိုးရဘက်က နားလည်ထားတာက ဒီပုံတွေအတိုင်းပါ။ ဒီရေးထားတဲ့ စာတွေအတိုင်းဆိုရင် မြန်မာအစိုးရက မေတ္တာ ဂရုဏာကြီးစွာထားပြီးတော့ လုပ်ပေးတာလို့ဆို နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအလုပ်သမား ခံနေရတာတွေကတော့ မသက်သာပါဗျာ။ ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ခ ဘတ်ငွေ ၆၀၀၀ ကျော်ကနေ တစ်သောင်းကျော်အထိ ကုန်ကျပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်(ခေါ်) Work permit ၂နှစ်စာ ၃၈၀၀ ဘတ်နဲ့ ကျမ္မာရေး သွေးစစ်ခ ဆေးရုံသို့ ပေးသွင်းရငွေ ဘတ်၁၈၀၀ ကုန်ကျပါတယ်။ Work permit လျှောက်တဲ့ ထိုင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးရုံး အောက်မှာ ဘတ် ၃၀၀/၅၀၀ ပေးရတဲ့ ပွဲစားတွေက လုပ်စားလို့ ရှိပါသေးတယ်။ အားလုံးပေါင်းလိုက်ရင် ဒီယာယီပတ်စပို့ အတွက် အရပ်ရပ် ကုန်ကျငွေပေါင်း ဘတ်နှစ်သောင်းဝန်းကျင် ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ပြန်ရင်လည်း အလုပ်ကမရှိ၊ ရှိတဲ့အလုပ်ကလည်း ထမင်းဝအောင် မရပြန်၊ အခြားသော အထွေထွေ အကြပ်အတည်းတွေက များတာနဲ့ ထိုင်းမှာပဲ ကုတ်ကပ်နေကြတော့တယ်။ မြန်မာ အလုပ်သမား တွေထဲမှာ ရုံးတွေကို မသွားတတ်သူတွေနဲ့ စာမတတ်သူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
မြန်မာတွေကို ဘယ်လိုပဲ နှိပ်ကွပ်နှိပ်ကွပ် ခေါင်းငုံ့ခံပြီး နေတာကိုလည်း ထိုင်းတွေက သိတယ်။ ဘယ်သူကမှ ထိထိရောက်ရောက် အကာအကွယ် မပေးနိုင်တာကိုလည်း ထိုင်းတွေကသိတယ်။ ဒါကြောင့် လုပ်ချင်သလို လုပ်နေကြတာဖြစ်တယ်။
ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ဖို့အတွက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေ အချင်းချင်း အတိုးနဲ့ ချေးငှားရတာ ရှိသလို နေရပ်ရင်းကို ပြန်မှာရတာလည်း ရှိပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဘယ်သို့သော အကျိုးအမြတ် ရရှိသလဲ ဆိုတာကို ကျနော်တို့ အလုပ်သမားတွေ မသိရှိရပေမယ့် ဒီထိုင်းဘက်အခြမ်းမှာတော့ ထိုင်းကုမ္ပဏီတွေနဲ့ ထိုင်းအစိုးတွေ အကျိုးကျေးဇူး ရှိနေတာတော့ သေချာနေပါတယ်။ အနိမ့်ဆုံးအဆင့် ယာယီပတ်စပို့ လုပ်တဲ့ နေရာတွေနားမှာ အစားအစာ တစ်ခုခုရောင်းတဲ့ ဈေးဆိုင်တစ်ဆိုင်လောက်ကို မေးကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။
ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ပြီးတဲ့ နောက်မှာ မြန်မာအစိုးရက အလုပ်သမားတွေကို ပြောထားသလို အကာအကွယ် တွေ မရရှိကြပါဘူး။ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့ ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေဟာ မြန်မာအလုပ်သမားတွေမှာ ယာယီ ပတ်စပို့ မကလို့ သံတမန်ပတ်စပို့ ရှိရင်တောင် ဖမ်းစားနေကျမို့ ဖမ်းစားတုန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒေါက်တာ မတင်ဝင်းပြောသလို ထိုင်းဆိုတာ ငယ်နိုင်…ပါတဲ့။ အဲဒါကိုပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တော့ ဖမာ့ဆိုတာ ကြီးနိုင်ပေါ့။ နှစ်ပေါင်း၂၀ ကျော်လောက် ထိုင်းတွေဆီမှာ ဗမာတွေကျွန်လာလုပ်နေခဲ့ရပြီ။
ဒီအောက်မှာပြထားတဲ့ပုံကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့က အယ်ကရှိုင်လမ်းမှာရှိတဲ့ ဘန်ကောက် ၈ ဆေးရုံအနီး ကန်ချနလမ်းမ ကားဂိတ်မှာကားစောင့်ရင်း၊ လုယက်ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသူပါ။ ယာယီပတ်စပို့ရှိတဲ့ အသက် ၁၉နှစ်အရွယ် မောင်လုံဆိုတဲ့ ကရင်အလုပ်သမားတစ်ယောက်ပါ။ သူဟာ ပတ်စပို့ကို ထုတ်ပြပေမယ့် ထိုင်းပုလိပ်က သေနတ်နဲ့ ချိန်တယ်။ လက်ထိပ်ခတ်ပြီး လက်နှိပ်ဓါတ်မီးနဲ့ ဆယ်ချက်ထက် မက ရိုက်နှက်ပါတယ်။ ဆေးရုံကိုသွား လိုက်ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဘတ်ငွေ ၆၃၀၀ ကိုလည်း လုယက်ယူငင် သွားခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်လိုလုပ်ရပ်လဲလို့ မေးရပါမယ်။ ဒီကိစ္စနယ်မြေရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်တိုင်တန်းထားပါတယ်။
ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေရဲ့ ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ အကာအကွယ်ကိုတော့ နှစ်နိုင်ငံ အစိုးရတို့က လျှစ်လျှူရှုထားကြတယ်လို့ ပြောရင်ရမယ်ထင်ပါတယ်။ မိမိပိုက်ဆံနဲ့ အကုန်အကျခံပြီး လုပ်ထားတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ၂နှစ်ပြည့်မှ ပေးမယ်လို့ ဒီလိုစာကပ်ထားတဲ့ အလုပ်ရုံတွေရှိသလို စကားဖြင့်သာပြောပြီး ပတ်စပို့တွေကို သိမ်းထားတဲ့ စက်ရုံတွေလည်း အထူးများပြားနေပါတယ်။ ပတ်စပို့ လုပ်ထားတာကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့ ကိုသွားရတယ်ဆိုပေမယ့် အလုပ်အကိုင် အပြောင်းအရွေ့ ကိစ္စတွေ၊ ကျမ္မာရေး ၀န်ဆောင်မှုတွေက ယခင် (ဘတ်)နဲ့ အတူတူ ကုန်ကျပါသေးတယ်။ ဒီယာယီပတ်စပို့ လုပ်လိုက်တာကို ခြုံပြောရရင် အလုပ်သမားတွေအတွက် ၂ဆကနေ ၄ဆအတွင်း ကုန်ကျသွားတာပဲ အဖတ်တင်ပါတယ်။ ထိုင်းလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ထိုင်းပုလိပ်တွေ ဥပဒေကို ချိုးဖေါက်နေတာကို သိရှိပေမယ့် ထိရောက်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု မရှိလေတော့ မြန်မာ အလုပ်သမားများခမျာ ပုလိပ်စားပြီး ကျန်တာကိုပဲ စားရပါတော့တယ်။ မဟာချိုင်မှာများဆိုရင် စာရွက်မှာ ကဏန်းရေးပြီး ဖမ်းစား နေကျဖြစ်တယ်။ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေကလည်း ဖိနှိပ်ချင်သလို ဖိနှိပ်ဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ထိုင်းအစိုးရ၊ ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်နဲ့ ထိုင်းပုလိပ်တွေဟာ ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမား တစ်ယောက်ကို ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ယခင်အတိုင်းပါပဲ။ မြန်မာအစိုးရ၊ ထိုင်းအစိုးရနဲ့ ထိုင်း အင်ဂျီအို အချို့တွေကတော့ ယာယီ ပတ်စပို့လုပ်တာ အလုပ်သမားတွေအတွက် အခွင့်အရေး အပြည့်ရမယ်။ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး ဘာညာပြောခဲ့ကြတယ်။ ခုလည်း ပြောကြတုန်းပဲဖြစ်တယ်။ အတိုင်းအတာ တစ်ခု အထိတော့ မှန်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာအလုပ်သမား အတော်များများကတော့ နေရပ်ရင်းက လိပ်စာ အမှန်၊ မိဘအမည် အမှန်အကန်တွေကို အသိပေး လိုက်ရတော့တယ်။ မတရားငွေကောက်ခံဖို့ အခွင့်အလမ်း သာသွားတယ်။ ခုထိုင်းအစိုးရက စပြီးဖြတ်တော့မယ်လေ။ လိုသလိုလုပ်လို့ ရသွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာအစိုးရက နောင်တစ်ချိန် မကောက်လာဘူးလို့ဘယ်သူ အာမခံမလဲ။ ဒီယာယီပတ်စပို့ လုပ်လိုက်တဲ့ အတွက် မြန်မာအလုပ်သမားတွေမှာတော့ တစ်နှစ် အနည်းဆုံး အကြွေးဆပ်ရမယ်။ ရသင့် ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေတော့ မရရှိဘူး။
ဒီယာယီ ပတ်စပို့ ဆိုတာ အမှန်က သန်းချီရှိနေတဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ အတွက် လုပ်ပေးသင့်တဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး။ ထိုင်းမှာရှိတဲ့ အောက်ခြေ အလုပ်သမားတွေနဲ့ တန်လည်းမတန်ဘူး။ မတန်ဘူးဆိုတာ ပတ်စပို့ လုပ်ငန်းစဉ်၊ ပတ်စပို့ ကိုင်ဆောင်ထားသူ လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ရမယ့် ကိစ္စတွေက ဘာလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင် မသိသူများကြတာကြောင့် ဖြစ်တယ်။ work permit ကိစ္စတို့ ၊ ရက်ပေါင်း ၉၀ တစ်ကြိမ် လ၀က ရုံးကို သွားရောက်ကြမှာဆိုတော့ (၁)အချိန်ကုန်တယ်။ (၂)လမ်းစရိတ်ကုန်တယ်။ (၃)အလုပ်ခွင့်မရတာရှိတယ်။ (၄)အလုပ်သမားရော၊ လုပ်ငန်းရှင်ကိုယ်တိုင်ကပါ တရားဝင်ဖြစ်အောင် လုပ်ရမယ့် အစီအစဉ်တွေကို မသိဖြစ်နေတယ်။ (၅)လုပ်ငန်းရှင်က ပတ်စပို့ကို သက်တမ်းတိုး မထားတဲ့အတွက်၊ ပတ်စပို့ လုပ်ထားပြီး သေနေတဲ့ အလုပ်သမားတွေ ရှိနေတယ်။( ၆)ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်က ထိုင်းပုလိပ်ကို ခေါ်ပြီး ဖမ်းဆီးလို့ ရဆဲပဲဖြစ်တယ်။ မြန်မာအလုပ်သမားမှာ ကာကွယ်ပေးမယ့် သူမရှိပါ။ (၇)ကိုယ်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် လုပ်ထားပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်က ၂နှစ်ပြည့်မှ အလုပ်သမားတွေကို ယာယီပတ်စပို့ ပေးမယ်လို့ဒီလို စာရေး ထားတာတောင်ရှိပါ့ဗျာ။
မြန်မာအစိုးက အဖမ်းအဆီးမရှိ၊ စစ်ဆေးခြင်းမရှိ၊ အခွန် ကောက်ခြင်း မရှိ၊ ထိုင်းအလုပ်သမားနဲ့ တန်းတူအခွင့် အရေးရရှိရေးလို့ ရေးထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယာယီပတ်စပို့ လုပ်ပြီးတဲ့ အလုပ်သမား ထက်ဝက်လောက်ရဲ့ ယာယီပတ်စပို့တွေကို လုပ်ငန်းရှင်တွေ သိမ်းထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုနောက်ဆုံး ဘယ်လောက်ထိ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေဆီကနေ အကျိုးအမြတ်တွေကို တရားသဖြင့်ရော၊ မတရား သဖြင့်ပါ ရယူဖို့ ထိုင်းအစိုးရ ပြင်ဆင်လာပါသလဲ။ ဘယ်လောက်ထိ ရက်စက်သလဲ၊ ကျနော်တို့ လုပ်အားခ တွေကို ၀ါးမြိုလိုသလဲ။ ခေါင်းပုံဖြတ်ချင်သလဲ။
လာအိုနဲ့ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေအတွက် အယင် နေထိုင်ခွင့် (ဘတ်)ရှိသူရော ခုလုပ်နေကြတဲ့ ယာယီ ပတ်စပို့ လုပ်ထားသူတွေကိုပါ လာမယ့် ၂၀၁၁ ခုဇန္န၀ါရီလကနေ လစဉ် အလုပ်သမားတစ်ဦး ဘတ် ၄၀၀ နှုန်းနဲ့ ၆ လတိုင်တိုင် စုစုပေါင်း ၂၄၀၀ဘတ်စီ၊ ဖြတ်တောက်ခံရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘောဒီယား အလုပ်သမားတွေ အတွက်တော့ တစ်လကိုဘတ် ၃၅၀နှုန်းနဲ့ ၆လ၊ စုစုပေါင်း ဘတ်ငွေ ၂၁၀၀ စီ ဖြတ်တောက်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ထိုင်းအလုပ်သမား ၀န်ကြီးအမိန့် ထုတ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖြတ်တောက်မယ့် ငွေကို ပေးသွင်းဖို့ ပျက်ကွက်ခဲ့ပါလျှင် လစဉ်ပေးသွင်းရမယ့် ငွေရဲ့၂ ရာခိုင်နှုန်း အပိုပေးဆောင်ရမယ်။ ထိုင်းအလုပ်သမား မှတ်ပုံတင်ဌာနမှာ ပေးသွင်းရမယ်လို့ လည်း ဆိုပါတယ်။
ဒီငွေတွေကို ဖြတ်တောက်ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ထိုင်းအစိုးရက ရွေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ မူရင်းနိုင်ငံကို ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် ပြန်လည်ထုတ်ယူနိုင်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ ပြန်ထုတ်မသွားခဲ့ရင်လည်း၊ နောက်တစ်ကြိမ် အလုပ်ပြန်လာလုပ်ရင် ထပ်ပြီးတော့ မဖြတ်တောက်တော့ဘူးလို့ ပြောထားပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းမှာ ထိုင်းလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (လ၀က)က ၂၇၀၀၀၊ ထိုင်း စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့တာက ၆၄၀၀၀ဦး၊ ထိုင်းရေတပ်က ၂၈၀၀ တို့ကို ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ မြန်မာ အလုပ်သမားပေါင်း ၂သိန်းခွဲလောက်ကို မူရင်းနိုင်ငံသို့ ပို့ ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာအလုပ်သမား တစ်ယောက်ဆီက ဘတ်ငွေ ၂၄၀၀ နုန်းနဲ့ မြန်မာအလုပ်သမား တစ်သိန်းအတွက်နဲ့ပဲ တွက်ကြည့်၊ ဘတ်သိန်းပေါင်း ၂၄၀၀ (ဘတ် ၂ ဒဿမ၄ဘီလျံ) ထိုင်းအစိုးရက မြန်မာ အလုပ်သမားတွေ ချွေးနဲစာက အလကား ယူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်အလုပ်သမားက မြန်မာပြည်ကို ပြန်မယ်ဆိုပြီး တောင်းယူရရှိနိုင်မလဲ။ အလုပ်သမား သေသွား ရင်ကော။ ထိုင်းအစိုးရက ဒီသန်းပေါင်းများစွာသော ငွေကို မတရား ယူထားပဲမဟုတ်လား။ အလွန် ရယ်စရာကောင်းတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ စကားဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာကျော်မယ့် ပျက်လုံးလဲဖြစ်ပါတယ်။
ယာယီပတ်စပို့ကို မြန်မာအလုပ်သမားတွေ ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ မဖြစ်မနေ လုပ်နေကြပေမယ့် ထိုင်းနဲ့ မြန်မာအစိုးရတို့ ကတော့ အလုပ်သမားတွေရဲ့ အခွင့်အရေးတွေကို ဥပဒေအတိုင်း အကာအကွယ်မပေး နိုင်တာကတော့ အသေအချာပါ။ ထိုင်းပုလိပ်တွေက မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို တွေ့တာနဲ့ ဘတ်ပါပါ မပါပါ။ ယာယီပတ်စပို့ ပါပါ မပါပါ ကားပေါ် တင်ခေါ်သွားလိုက်တာပါပဲ။ နေ့တိုင်းလို စိတ်မချမ်းသာစရာ မြင်တွေ့ နေရဆဲပါ။
ထိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ မြန်မာအစိုးရက တရားဝင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းကို ဒီလိုမတရားလဲလုပ်လိုက်တာ ရှိသေးတယ်။
ထိုင်းနိုင်ငံမှာ သန်းချီရှိတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေဟာ မြန်မာပြည်အတွက် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ငွေတွေရှာပြီး ပို့နေကြသူတွေပါ။ ဒီသန်းချီရှိတဲ့ အလုပ်သမားတွေကို ထိုင်းမှာ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကမှ လုံလောက်တဲ့ အကာအကွယ်၊ အကူညီကိုလည်း မပေးစွမ်းနိုင်ပါ။ မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ တရားဝင် နေထိုင်ခွင့် လုပ်ထားတဲ့ မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို မိမိတိုင်းပြည်ကို နိုင်ငံခြားငွေရှာပေးသူတွေ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ လူသားရင်းမြစ် လုပ်အားရှင်တွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုမယ်ဆိုရင်။ အနည်းဆုံးအဆင့် မိမိနိုင်ငံသား အလုပ်သမားတွေအဖြစ် သနားစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ ထိုင်းပုလိပ်နဲ့ ထိုင်းအစိုးရကို (မင်းတို့တွေ တရားဝင် မြန်မာ အလုပ်သမားတွေကို မတရားမလုပ်ကြနဲ့ လုပ်တယ်လို့ ငါတို့ကိုယ်တိုင် ကြားလာရင်တော့ ငါတို့အစိုးရအနေနဲ့ အရေးယူ ဆောင်ရွက် ရလိမ့်မယ်) ဆိုတဲ့ စကားလေးတစ်ခွန်း၊ မြန်မာ အလုပ်သမားတွေရှေ့က ကြိုပြောထားရင် ဖမ်းစားနေကျ ထိုင်းပုလိပ်တွေ ဖမ်းချင်းတိုင်းဖမ်း၊ နှိပ်ကွပ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်းတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(စကားချပ်/ဥပမာ။ ။ မြ၀တီနယ်စပ်ကို မြန်မာအစိုးရက လအနည်းငယ်ပိတ်လိုက်တာ ထိုင်းစီးပွားရေး အတော်ထိခိုက်တယ် ဆိုပဲ။ ကျနော်တို့ အလုပ်သမားအဆင့်တွေ မသိတဲ့ ငယ်နိုင် အချက်တွေ အများကြီး ရှိမှာပါဗျာ။)
ခု ထိုင်းမှာဖြစ်နေတာက မြန်မာတွေကို သတ်သတ်၊ သေသေ၊ လုပ်အားခပေးချင်ပေး၊ မပေးချင်နေ၊ မတော်မတရား ပြုကျင့် ချင်သလောက်ကျင့် ဘာဆိုဘာမျှ အပြစ်ပေး အရေးယူနိုင်တာ မရှိတာကြောင့် မြန်မာတွေ့လိုက်တာနဲ့ လိုချင်တာ တစ်ခုခုကို ရပြီဆိုပြီး ထိုင်းတွေ လက်ရဲဇက်ရဲ လုပ်ကြဆဲပါ။ ထိုင်းမှာခွေးကို ဂဲနဲ့ ပစ်လို့ မရပေမယ့် မြန်မာဆိုတဲ့ ဖမာ့ တစ်ယောက်လောက်ကိုတော့ ပုရွက်ဆိတ် တစ်ကောင်ကို သတ်ပစ်လိုက်သလို ဘာမှ မဖြစ်တဲ့ အနေအထားပါဆိုတဲ့ အကြောင်း နေပြည်တော်က မြန်မာမင်းများကို သိစေကြောင်းပါခင်ဗျာ။
ကျော်သောင်း Like this:Like Loading...
where there is no social justice, there can be no respect for human rights or human dignity.
it is the most sordid and ugly side of human affairs.
this ugliness will continue as long as the powers that be are willing to trade human suffering for the bottom line:$$$$$$.
the only hope left for the burma crises is that Daw Aung San Suu Kyi can bring back Burma from the brink of complete devastation of its long suffering peoples. Hope springs eternal even in darkest times…
NLD ၏ လျှောက်ထားချက်ကို နေပြည်တော်ရှိ ဗဟိုတရားရုံးချုပ် ပယ်ချ »